ISt Eustatius likhaya lokuqala kwiCaribbean kwiCaribbean | Eustatius yaseSt
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » St Eustatius » ISt. Eustatius likhaya lokuqala kwiCaribbean
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCaribbean • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zokuhamba kwezemfundo • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Iindaba ezijongene noKhenketho • St Eustatius • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
ISt. Eustatius likhaya lokuqala kwiCaribbean
Le yiprojekthi yezemfundo ekhokelwa nguJaap Vreling kunye noMnu Ishmael Berkel. UJaap ufundisa kwiDyunivesithi yaseAmsterdam kwaye wayeyinxalenye yeqela laseDatshi loPhando ngezeNkwenkwezi ngo-2010, apho kwaqalwa khona iprojekthi yedome
Indawo yokubala izijikelezi-langa ebekwe kwiLynch Plantation yenye yezinto ezinomtsalane kubakhenkethi eSt Eustatius
I-Eustatius planetarium dome inokuhlalisa iindwendwe ezingama-25 ngexesha elinye
Okwangoku, akukho ndleko yokungena kwiziko leplanethi laseSt. Eustatius nanjengoko lisesesigabeni salo,
Zimbalwa eziloluhlobo emhlabeni, kwaye ngokuka Jaap Vreling, angekho ngaphezulu kwesihlanu, kwaye ngoku iSt.
Le yiprojekthi yezemfundo ekhokelwa nguJaap Vreling kunye noMnu Ishmael Berkel. UJaap ufundisa kwiDyunivesithi yaseAmsterdam kwaye wayeyinxalenye yeqela laseDatshi loPhando ngezeNkwenkwezi ngo-2010, apho kwaqalwa khona iprojekthi yedome. Ekunye neqela labafundi abali-14 beyunivesithi yeenkwenkwezi, wahamba nekhaya eli-3 esiya ezikolweni kulo lonke elaseNetherlands, ebonisa, kwaye ngamanye amaxesha ene-astronomy edityaniswa kwiinkqubo zesikolo, njengoko ubukho besijikelezi-langa kwisiza busebenza njengoncedo olubonakalayo lokufundisa ngaloo mbandela.
Kwiminyaka eliqela, uJaap waphupha ngokukwazi ukuzisa indawo yokubonisa iiplanethi eStatia. UIshmael Berkel wesi siqithi, naye wayeligcina elo phupha, kwaye iingxoxo ezininzi zabanjwa phakathi kwezi zibini ukumisela indlela yokufeza oko. Bobabini bayalixabisa ixabiso lalo lemfundo, beqonda ukuba xa abafundi betyelele iiplanethiyari bayashiya benomdla omkhulu ekufundeni. Kumazwe amaninzi ehlabathi, ukungcoliseka kokukhanya kwenza kube nzima ukonwabela isibhakabhaka ebusuku. UStatia akazange abe nasithintelo kodwa phambi kwangoku, kwakungekho ngcaciso ichazayo ngokulula malunga noko kwakubonwa. Indlela yobisi, iinkwenkwezi, iiplanethi, inyanga, indlela ezinxibelelana ngayo, indlela ookhokho abayisebenzisa ngayo ukuhambahamba ukusuka kwindawo ukuya kwindawo kunye nezinye izinto ezibonakalayo zommandla wendalo ngoku zingafundiswa kwindawo ekhangayo yeplanethiyathi eStatia. Ukutyelelwa kweeplanethiyamu kuye kwangqineka kuluncedo kubafundi bayo yonke iminyaka, kwasekuqaleni kwe-Kindergarten. Abafundi, nangona kunjalo, ayingabo kuphela abaxhamli. Ngamava wonke umntu anokuwaxabisa.
Indawo yokubonisa izijikelezi langa lolunye utyelelo kubakhenkethi kwesi siqithi. Ifumaneka eLynch Plantation, idome inokuhlala abantu abangama-25 ngexesha elinye. Ukuxhotyiswa ngesoftware yamva nje kolu shishino, iindwendwe ziya kugutyungelwa yimpawu yeqonga layo, elikhokelela kumava anyanisekileyo njengoko behamba kwindalo iphela.
Ukuvulwa ngokusesikweni kwenzeka ngoFebruwari 23, 2021 neqela elincinci leendwendwe ezimenyiweyo ezazikhona. Uluntu lwamkelekile ukuba lundwendwele ngoFebruwari 24, 25, kunye no-26 ukusuka ngo-9: 00 kusasa ukuya ku-12: 00 ngokuhlwa. Okwangoku, akukho ndleko yokungena njengoko isekwinqanaba layo lokulinga, nangona kunjalo, abaphuhlisi babonakalisile ukuba imali yokungena inokuhlawulwa ekugqibeleni.
Ikamva eliqaqambileyo, utshilo uMnu. Berkel, "kwaye silapha ukuqinisekisa ukuba bonke abantu baseStatians, abakhulu nabancinci, banethuba lokulonwabela. Sikwanombono wokuba abakhenkethi abatyelele isiqithi sethu baya kuba nakho ukongeza kule nto yabakhenkethi. ”